Ezinye zam Izongezelelo ziselubala okanye angwevu (ngaphandle texture). Ndingenza ntoni ? (FSX SP2 / lonikezelo)
Into ebalulekileyo, xa unendlu add-on yeyiphi imodeli 3D wadalwa ukuze FS2004 kodwa ezisetyenziswa FSX SP2 (ekwabizwa ngokuba Port Ukutyhubela), ukuba ukuvala Imboniso DirectX 10 kwi ngokwezicwangciso FSX. Enyanisweni, FS2004 addons awahambelani DirectX 10.
Umzekelo 1: A inxalenye moya ungenakubonwa.
Umzekelo 2: Iphiko xa moya ezingabonakaliyo.
Umzekelo 3: Lo moya ndiyingwevu ngokupheleleyo, ngaphandle texture.
Isisombululo: Sukuzikhupha DirectX 10 yemboniso.